Wiil ina boqor Sacuudi ah oo Mareykanka lagu xiray kadib markuu kufsadey gabar + fadeexad | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Wiil ina boqor Sacuudi ah oo Mareykanka lagu xiray kadib markuu kufsadey gabar + fadeexad
Wiil ina boqor Sacuudi ah oo Mareykanka lagu xiray kadib markuu kufsadey gabar + fadeexad
Bulsha:- Booliska magaalada Los Angeles ayaa xabsiga u taxaabay wiil reer boqor Sacuudi ah kaas oo lagu magacaabo Majed Abdulaziz Al-Saud kadib markii gabar gurigiisa ka shaqeyneysay uu ku khasbay in uu isticmaalo jirkeeda.
28-jirkaan ayaa markii hore ku eedeysnaa “kufsasho”, balse waxaa eedeyntaasi loo badalay in uu khasbay haweyneeydaasi si ay ula seexato.
saudi prince jailed in los angels after rapping a made girl Majed Abdulaziz Al-Saud
Al-Saud ayaa waxyar kadib waxaa lagu sii daayay lacag “madaxfurasho” oo gareysa 300 oo kun oo dollar.
Dambi baarayssha kiisha ina boqorkan ayaa sidoo kale waxa ay wareysteen gabdho kale oo uu ninkani isku dayay in uu xoogo, sida uu Drake Madisonu sheegay jariiradda LA Times.
Ina boqorkan ayaa la xiray maalinimadii Arbacada kaddib markii dariskiisu arkeen haweeney dhiig ka da`ayo taas oo saaran darbiga gurigiisa oo ku yaal Wallingford Drive, oo aan sidaa uga fogeyn Beverly Hills.